အသီးအနှံနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ မြားမြားစားပါ။
တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ အသကျရှညျရှညျနထေိုငျခငျြတယျဆိုရငျ အသီးအနှံနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ မြားမြားစားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ London Imperial College ရဲ့ ရှာဖှတှေရှေိ့ခကျြအရ နစေ့ဉျ အသီးအနှံနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ (၁၀)မြိုးတိတိစားသုံးတဲ့သူတှဟော ရောဂါဖွဈနိုငျမှုနှုနျးကို အကောငျးဆုံး ကာကှယျပေးပါတယျ။ တကယျလို့ လူတှအေနနေဲ့သာ အသီးအနှံနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားမြားစားမယျဆိုရငျ ကမ်ဘာတဈဝှမျး သဆေုံးသူဦးရေ ၇.၈ သနျးကို လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ ဆိုပွီး သုတသေနပွုလုပျသူတှကေပဲ ခနျ့မှနျးကွပါတယျ။ “ သကျစောငျ့ဓာတျတှေ (Vitamins) ၊ သတ်တုဓာတျတှနေဲ့ အသီးအရှကျတှမှောပါတဲ့ ဖိုငျဘာဓာတျတှကေသာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာဖို့အတှကျ အဓိကဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ အသား၊ငါးကို သငျ့တငျ့မြှတစှာ စားသုံးပွီး အသီးအရှကျတှကေိုသာ မြားမြားစားပေးပါ . . . ” ဆိုပွီး Komar က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
စိတျသဘောထားကွီးစှာနဲ့ အခွားသူတှကေို ကူညီပါ။
အခွားသူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးပွုလုပျတာကလညျး စိတျဖိစီးမှုတှမှေ သကျသာရာရတဲ့အတှကျကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုလညျး အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ “ သကျကွီးပိုငျးတှကေို သုတသေနပွုလုပျပွီး တှရှေိ့ခကျြတှအေရ သူတို့အသကျရှညျရှညျနနေရေတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုဟာ အခွားသူတှကေို ကူညီထောကျပံ့ခဲ့တာတှကွေောငျ့ ဖွဈတယျ . . .” လို့ Stanford University ရဲ့ ပရျောဖကျဆာ Emma Seppala က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စိတျဖိစီးမှုတှေ လြော့ကအြောငျပွုလုပျခွငျး၊ အခွားသူတှကေို ကူညီခွငျးတှဟောလညျး ရောဂါဖွဈနိုငျခတြှေကေို လြော့ကစြပေါတယျ။
ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျတဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျခငျြတယျဆိုရငျလညျး ငါးစားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ “ Omega3အကျဆဈဓာတျ ကွှယျဝစှာ ပါဝငျတဲ့ ဆျောလမှနျငါးကို အနညျးဆုံး တဈပတျ (၂)ကွိမျစားသုံးသငျ့ပါတယျ . . . ” လို့ Palinski – Wade မှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ “ အမြိုးသားကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု စဈတမျးကောကျခကျြတှအေရ အမရေိကနျနိုငျငံသား (၉၅) ရာခိုငျနှုနျးလောကျဟာ အသကျရှညျရှညျနနေိုငျအောငျ ကူညီထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့ Omega3အကျဆဈဓာတျ ခြိူ့တဲ့နတောကို တှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ . . .” ဆိုပွီး Palinski – Wade မှပဲ ဆကျလကျ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှာ အလုပျရှုပျထှေးခွငျးတှေ၊ ပငျပနျးခွငျးတှနေဲ့ လုံးပနျးနရေပွီး အိပျစကျခွငျးနဲ့ပငျ နတေ့ဈနကေို့ အဆုံးသတျကွပါတယျ။ “ လူတှဟော တဈနကေို့ အနညျးဆုံး (၇)နာရီကနေ (၈)နာရီအထိ အိပျစကျအနားယူသငျ့ပါတယျ . . . ” ဆိုပွီး PIH ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုစငျတာရဲ့ မနျးနဂေငျြးဒါရိုကျတာ Sonya W. Thomas မှ ပွောကွားထားပါတယျ။ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ အိပျရေးပကျြခွငျးဟာ ကနျြးမာရေးခြို့တဲ့မှု ဖွဈစပွေီး အဝလှနျခွငျး၊ နှလုံးရောဂါဖွဈခွငျးနဲ့ စိတျဓာတျကဆြငျးခွငျးတို့ကို ဖွဈစပေါတယျ။
ဘယျရီသီးတှဟော Antioxidant တှရေဲ့ အကောငျးဆုံး အရငျးအမွဈဖွဈပွီး ဆဲလျတှပေကျြစီးဆုံးရှုံးမှုကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ “ ဘယျရီသီးတှမှော Antioxidant ဓာတျနဲ့ Phytochemical ဓာတျတှေ ကွှယျဝစှာပါဝငျတာကွောငျ့ ဘယျရီသီးတှကေို နစေ့ဉျ စားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ . . . ” လို့ Dr. Shukitt-Hale မှ ပွောကွားထားပါတယျ။ “ Phytochemical ဓာတျတှဟော စိတျဖိစီးမှုတှကေို ဖွဈစတေဲ့ ဆဲလျတှကေို လြော့ကအြောငျ ပွုလုပျပေးပါတယျ။ သူတို့မှာပါဝငျတဲ့ ဇီဝဂုဏျသတ်တိတှဟောလညျး ဦးနှောကျထိုငျးမှိုငျးမှုကို လြော့ကအြောငျ ပွလုပျပေးပါတယျ . . . ” ဆိုပွီး Dr. Shukitt မှ ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
သိပ္ပံနည်းပညာအရ လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်နိုင်သော နည်းလမ်းကောင်းများ။
အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားပါ။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ London Imperial College ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ နေ့စဉ် အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် (၁၀)မျိုးတိတိစားသုံးတဲ့သူတွေဟာ ရောဂါဖြစ်နိုင်မှုနှုန်းကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ လူတွေအနေနဲ့သာ အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း သေဆုံးသူဦးရေ ၇.၈ သန်းကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ် ဆိုပြီး သုတေသနပြုလုပ်သူတွေကပဲ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ “ သက်စောင့်ဓာတ်တွေ (Vitamins) ၊ သတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ အသီးအရွက်တွေမှာပါတဲ့ ဖိုင်ဘာဓာတ်တွေကသာ သင့်ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာဖို့အတွက် အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသား၊ငါးကို သင့်တင့်မျှတစွာ စားသုံးပြီး အသီးအရွက်တွေကိုသာ များများစားပေးပါ . . . ” ဆိုပြီး Komar က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စိတ်သဘောထားကြီးစွာနဲ့ အခြားသူတွေကို ကူညီပါ။
အခြားသူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြုလုပ်တာကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေမှ သက်သာရာရတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ “ သက်ကြီးပိုင်းတွေကို သုတေသနပြုလုပ်ပြီး တွေ့ရှိချက်တွေအရ သူတို့အသက်ရှည်ရှည်နေနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဟာ အခြားသူတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တာတွေကြောင့် ဖြစ်တယ် . . .” လို့ Stanford University ရဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ Emma Seppala က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့ကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အခြားသူတွေကို ကူညီခြင်းတွေဟာလည်း ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ငါးစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ “ Omega3အက်ဆစ်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ ဆော်လမွန်ငါးကို အနည်းဆုံး တစ်ပတ် (၂)ကြိမ်စားသုံးသင့်ပါတယ် . . . ” လို့ Palinski – Wade မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ အမျိုးသားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စစ်တမ်းကောက်ချက်တွေအရ အမေရိကန်နိုင်ငံသား (၉၅) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်အောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ Omega3အက်ဆစ်ဓာတ် ချိူ့တဲ့နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် . . .” ဆိုပြီး Palinski – Wade မှပဲ ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အလုပ်ရှုပ်ထွေးခြင်းတွေ၊ ပင်ပန်းခြင်းတွေနဲ့ လုံးပန်းနေရပြီး အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပင် နေ့တစ်နေ့ကို အဆုံးသတ်ကြပါတယ်။ “ လူတွေဟာ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး (၇) နာရီကနေ (၈) နာရီအထိ အိပ်စက်အနားယူသင့်ပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး PIH ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာရဲ့ မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ Sonya W. Thomas မှ ပြောကြားထားပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှု ဖြစ်စေပြီး အဝလွန်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ဘယ်ရီသီးတွေဟာ Antioxidant တွေရဲ့ အကောင်းဆုံး အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး ဆဲလ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ “ ဘယ်ရီသီးတွေမှာ Antioxidant ဓာတ်နဲ့ Phytochemical ဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ဘယ်ရီသီးတွေကို နေ့စဉ် စားသုံးပေးသင့်ပါတယ် . . . ” လို့ Dr. Shukitt-Hale မှ ပြောကြားထားပါတယ်။ “ Phytochemical ဓာတ်တွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်တွေကို လျော့ကျအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ သူတို့မှာပါဝင်တဲ့ ဇီဝဂုဏ်သတ္တိတွေဟာလည်း ဦးနှောက်ထိုင်းမှိုင်းမှုကို လျော့ကျအောင် ပြလုပ်ပေးပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး Dr. Shukitt မှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous လူကွိုကျမြားရပေနျးစားခဲ့သညျ့ Golden Retriever ၊ Husky နဲ့ ကွကျကငျတို့ရဲ့ဇာတျလမျး။
Next အရပွေားအထူးကုဆရာဝနျမြားပွောပွတဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှ ကွှကျနို့ဖယျရှားခွငျးအကွောငျး။